थोमा – Word of Truth, Nepal
मत्ती १०:२-४ को सूचीको सातौं स्थानमा कुन चेलाको नाउँ छ? __________। उनलाई अर्को नाउँले पनि बोलाइन्थ्यो भन्ने कुरा यूहन्ना ११:१६ बाट जान्न सकिन्छ। त्यो अर्को नाउँ के थियो? _____________‌_। यी दुइटै नाउँको अर्थ एउटै हुन्छ। दिदमसको अर्थ “जुम्ल्याहा” (डबल) हो। थोमाको अर्थ पनि “जुम्ल्याहा” नै हो। यसैले सम्भवतः थोमा एक जुम्ल्याहा थिए यद्यपि बाइबलमा उनको जुम्ल्याहा भाइ वा बहिनीको उल्लेख भएको भेटिँदैन।
उनी विश्वास गर्नमा ढीलो थिए। त्यसैले उनले “शङ्कालु थोमा” भन्ने नाम कमाएका छन्। उनको धारणा यस्तो थियो – “नदेखेसम्म म विश्वासै गर्दिनँ!”
यूहन्ना ११:१५ मा येशूले चेलाहरूलाई भन्नभयो, “हामी उनी (लाजरस) कहाँ जाऔं।” आफ्नो मुख तुरुन्तै खोल्ने र अरूहरूलाई “हामी पनि जाऔं” भन्ने चेला को थिए (यूहन्ना ११:१६)?_____________‌_। के थोमाचाहिँ जानलाई डराइरहेका थिए? ___________‌_। के उनी ख्रीष्टसित मर्न समेत तयार थिए?_____________‌_। यसबाट थोमाको साहस र प्रभुप्रतिको भक्ति देख्छौं। येशू लगायत सबै चेलाहरूलाई के हुनेवाला छ भन्ने उनको सोचाइ थियो (यूहन्ना ११:१६)?_________‌_________ ________________। ख्रीष्टप्रतिको उनको भक्ति आफ्नो ज्यानको मायाभन्दा पनि गहिरो थियो। थोमा परिस्थितिको अँध्यारो पक्षलाई हेर्ने स्वभावका थिए। ज्यादै खराब परिस्थिति आइपर्नेछ भन्ने उनको सोचाइ थियो। उनको दृष्टिलाई मृत्युको छायाँले ढाकेको थियो। तर, घटनाक्रम थोमाले सोचेको जस्तै भएन! चेलाहरू येशूसँग बेथानीमा गए तर कसैले उनीहरूमध्ये एउटैलाई पनि मारेनन्! जुन घटना हुनेवाला नै थिएन त्यसका निम्ति थोमा व्यर्थमा फिक्री गरिरहेका थिए।
थोमाको हेराइ राम्रो थियो कि नराम्रो? ठीक थियो कि बेठीक? हेराइ नै केवल मृत्युको मात्र हुनु के ठीक थियो? ध्यान दिइनुपर्ने कुरालाई थोमाले ध्यान दिइरहेका थिएनन् र त्यसैले प्रभुले यूहन्ना ११:१५ मा त्यतिबेला भन्नुभएको कुरालाई अपनाउन उनी असफल भए- “अनि तिमीहरूले _____________ गर्न सक भनी म त्यहाँ नभएकोमा म तिमीहरूकै निम्ति आनन्दित छु; तरैपनि _____________‌ उनीकहाँ जाऔं।” यस पदमा येशूले: “तिमीहरू मर्न सक भनी” भन्नुभएन तर “तिमीहरूले _____________‌_ गर्न सक” भनी भन्नुभयो। परमेश्वरको उद्देश्य के थियो? येशूले उनीहरूलाई “मर्न सक” होइन तर “_____________‌_ गर्न सक” भनेर बेथानीमा लैजान चाहनुभएको थियो! येशूले उनीहरूलाई “मरण-स्थिति” तर्फ होइन “परमेश्वरको _____________‌_” (यूहन्ना ११:४) हुने सुन्दर स्थितितर्फ लैजाँदै हुनुहुन्थ्यो। थोमाले प्रभुको कुरालाई ध्यान दिएनन्! के तपाईं पनि कहिलेकाहीँ परमेश्वरको वचनले भनेको कुरामा ध्यान दिनदेखि चुक्नुभएको छ? के तपाईंको बुझाइ पनि कहिलेकाहीँ बिलकुलै गलत भएको छ? के परमेश्वरले तपाईंको निम्ति कुनै अप्रिय उद्देश्य राख्नुभएको छ भनेर तपाईंले केहिलेकाहीँ सोच्नुभएको छ जब कि परमेश्वरको उद्देश्य वास्तवमा सधैं सुन्दर हुन्छ?
के तपाईं पनि थोमाजस्तै हुनुहुन्छ? सधैं परिस्थितिको अँध्यारो पक्षलाई नै हेर्ने स्वभाव छ तपाईंको? जे कुरा पनि नराम्रै हुन्छ भन्ने खालको सोचाइ आउने गर्छ तपाईंमा? के तपाईं काल्पनिक समस्याहरूको बारेमा फिक्री गरी बस्नुहुन्छ? के तपाईं जहिले पनि बादल मात्र देख्नुहुन्छ तर नीलो आकाशचाहिँ देख्नुहुन्न? स्वयं परमेश्वरले संसार र संसारका सबै घटनाहरूमाथि नियन्त्रण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी कहिल्यै नबिर्सौं। स्वर्गका प्रभुले सबै कुरा बिगार्ने उद्देश्य राखेर काम गरिरहनुभएको छैन! बरु उहाँको महिमा र मानिसको भलाइको निम्ति सबै कुराहरूलाई मिलाउन त परमेश्वर एक “विशेषज्ञ” नै हुनुहुन्छ! परमेश्वरले सबै कुराहरू मिलाएर खराबी नभएर _____________‌ उत्पन्न गराउनुहुन्छ (रोमी ८:२८) भन्ने कुरा एउटा विश्वासीले सिक्नुपर्छ। यसैकारण हामीले गनगन गर्नु, अँध्यारो मुख लाउनु वा निराश बन्नु पर्दैन। बरु के गर्नलाई हामीलाई आज्ञा दिइएको छ (एफेसी ५:२०)?________ _____‌____________‌______________‌_। फिलिप्पी ४:४ मा हामीलाई के गर्नलाई आज्ञा दिइएको छ? __________________ __‌______________‌_
थोमाको बारेमा थप कुरा यूहन्ना १४ अध्यायमा पाइन्छ। यूहन्ना १४:१ मा येशूले भन्नुभयो, “तिमीहरूको हृदय _____________‌_ नहोस्।” त्यतिबेला थोमाको हृदय ज्यादै विचलित अवस्थामा भएको हुनुपर्छ। प्रभुलाई गिरफ्तार गरिएको त्यही रात थियो। परिस्थिति अँध्यारो देखिन्थो, विशेष गरी थोमाको नजरमा। यूहन्ना १४:३ मा येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई दिनुभएको सुन्दर प्रतिज्ञा के थियो? _______‌________________________________________ ______________। उनीहरूको आँखाले आशारूपी चम्किलो आकाशलाई देख्न सकून् भनेर उनीहरूलाई त्यतिखेरको निराशारूपी काला-काला बादलहरूभन्दा परतिर देखाउन प्रभु चाहनुहुन्थ्यो। येशू चेलाहरूलाई छोड्नेवाला हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मारिनेवाला हुनुहुन्थ्यो — त्यो साँचो हो। तर यो पनि साँचो हो, उहाँ मृत्युबाट बौरनेवाला हुनुहुन्थ्यो र फेरि फर्की आउनेवाला हुनुहुन्थ्यो! येशूले भन्नुभयो, “अनि म जहाँ जान्छु, त्यो तिमीहरू जान्दछौ, अनि तिमीहरू बाटो चिन्छौ” (यूहन्ना १४:४)। भनाइको तात्पर्य यो थियो, “म स्वर्ग जाँदैछु भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ, साथै स्वर्ग जाने बाटो पनि तिमीहरूलाई थाहा छ!”
थोमा त्यसबेला किन अनुपस्थित थिए, बाइबलले बताउँदैन। उनको अनुपस्थितिको पछाडि कुनै जायज कारण हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। हामीलाई यति कुरा थाहा छ, कुनै न कुनै कारण ख्रीष्टको बौरिउठाइको पहिलो साँझ उनी अरू चेलाहरूसँग भेला हुन सकेनन् जसको फलस्वरूप उनले एउटा ठुलो आशिष गुमाए! उनी अन्य चेलाहरूको “आनन्द””को अनुभवमा सहभागी बन्न पाएनन् (यूहन्ना २०:२०)। पूरै एक हप्ता उनी नैराश्य र अविश्वासको दलदलमा डुबिरहे जब कि अन्य चेलाहरू भने रमाहट गरिरहेका थिए। एउटा विश्वासी अरू विश्वासीहरूसँग एकै ठाउँमा भेला हुन छोडेर उसले पाउन सक्ने आशिषहरू गुमाएको परमेश्वर चाहनुहुन्न। हिब्रू १०:२५ मा हामीलाई बताइएको छ, “कसै-कसैको रीति भएझैं हामी एक ठाउँमा _________ हुन नछोडौं।” परमेश्वरका जनहरू भेला भएका बखत हामी पनि उपस्थित हुनुपर्छ नत्र भने हामीले आशिष गुमाउनेछौं! एकदमै उचित कारणबिना अनुपस्थित हुनु कहिल्यै पनि बुद्धिमानी होइन। मण्डली सभाहरूमा तपाईंको उपस्थिति कत्तिको नियमित छ? परमेश्वरले तपाईंलाई दिन चाहनुभएको कुरा गुमाउँदै हुनुहुन्छ कि?
थोमाले यूहन्ना २०:२८ मा भनेका कुरालाई विचार गर्नुहोस् – “हे मेरा ____________! र हे मेरा __________________।” थोमाले प्रभुलाई छुन आवश्यक नै परेन। उनले देखे र त्यति नै पर्याप्त भयो। एकै क्षणमा शङ्कालु थोमा विश्वस्त थोमा बने। उनी बिलकुलै विश्वस्त भए। फेरि कहिल्यै उनले बौरिउठाइको वास्तविकतालाई शङ्का गरेनन्।
थोमाले केवल पाँचओटा शब्दहरू उच्चारण गरे (यूहन्ना २०:२८) तर ती शब्दहरू कति सुन्दर छन्। उनको भाषा आश्चर्य र हर्षोल्लासको भाषा थियो, पश्चताप, विश्वास र भक्तिको भाषा थियो, सबै एउटै वाक्यमा! येशूलाई “परमेश्वर” भनेर सम्बोधन गर्नु के उचित थियो? आज कतिपय झूटा शिक्षकहरू येशू वास्तवमै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई विश्वास गर्दैनन्। के थोमाले येशूको ईश्वरत्वलाई विश्वास गरे?____________। साथै हामीले यो टिप्पणी गर्नुपर्छ, येशूले थोमालाई सच्च्याउनु भएन। प्रभुले यसो भन्नुभएन, “थोमा, तिमीले मलाई कहिल्यै पनि “परमेश्वर” भन्नु हुँदैन। म परमेश्वर होइनँ, त्यसैले फेरि कहिल्यै मलाई यसरी सम्बोधन नगर्नू।” प्रभुले यस्तो कुनै कुरा गर्नुभएन किनकि थोमाले जे भनेका थिए उहाँ सयमा सय प्रतिशत सो हुनुहुन्थ्यो! थोमाले किन विश्वास गरेका थिए भनी येशूले भन्नुभयो (यूहन्ना २०:२९)? __________________ __________________। उनले एक हप्ता अघि नै उनका दसजना मित्रहरूद्वारा बताइएको बौरिउठाइको खुशीको खबरलाई विश्वास गर्नुपर्थ्यो (यूहन्ना २०:२५) तर उनले सो गर्न इन्कार गरेका थिए। उनले देखेपछि मात्र विश्वास गरे।
थोमाको उदाहरणबाट हामी सबैले एउटा पाठ सिक्नुपर्छ। हामी सबैका लागि येशूले यी महत्त्वपूर्ण शब्दहरू बोल्नुभयो, “उनीहरू धन्य हुन, जसले ____________ ____________, तापनि ____________ गरेका छन्” (यूहन्ना २०:२९)।
बाइबलले भन्दछ, “हामी ________ देखेर होइन, तर ___________ द्वारा (परमेश्वरलाई उहाँको वचनकै आधारमा मानिलिएर) हिँड्छौं (२ कोरिन्थी ५:७)। परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो लिखित वचन दिनुभएको छ जसद्धारा हामीले ख्रीष्टको बारेमा जान्न सक्छौं र उहाँमाथि विश्वास गर्न सक्छौं “तर येशू नै परमेश्वरका पुत्र “ख्रीष्ट” हुनुहुन्छ भनी तिमीहरूले ____________ गर्न सक र ____________ गरेर तिमीहरूले उहाँको नामद्धारा जीवन पाओ भनी यी चाहिँ ____________ हुन्” (यूहन्ना २०:३१)। विश्वास गर्नेहरू धन्य हुन्! परमेश्वरलाई उहाँको वचनकै आधारमा मानि लिनेहरू धन्य हुन्! “परमेश्वरले जे भन्नुभयो, त्यो म विश्वास गर्छु” भन्नेहरू धन्य हुन्!
“येशूको कात्रो” आफ्नै आँखाले नदेखेसम्म म बौरिउठाइमा विश्वास गर्दिनँ। (उक्त “कात्रो”, Turin’s Shroud, चाहिँ एउटा चाखलाग्दो कुरा छ जसलाई कतिले येशूलाई दफन गर्न प्रयोग गरिएकै कात्रो हो भनी विश्वास गर्छन्।)
म बाइबल विश्वास गर्दिनँ, विशेष गरी आफूहरू पृथ्वीबाट माथि उठाइनेछौं भन्ने ख्रीष्टियानहरूको हावाको दाबी। मेरा ख्रीष्टियान साथीहरू यसलाई “र्‍याप्चर” भन्छन्। मेरै आँखाले उक्त र्‍याप्चरलाई नदेखेसम्म म ख्रीष्टियान कदापि बन्ने छैनँ।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 19:08:582020-04-28 14:39:42थोमा
फिलिप र बार्थोलोमाइमहसूल उठाउने मत्ती र शिमोन ज�...